Smalltalk about Java (saturngod & Lupyogyi) - Saturngod
Posted on Updated August 6, 2009 August 6, 2009 by saturngod
ဒီနေ့ Java အကြောင်းလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူပျိုကြီးနဲ့ ပြောမိဆိုမိတာလေးတွေကို ပြန်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
saturngod : java မှာ hello world အတွက် စာတွေ အများကြီးရေးရတယ်.. (system.out bla bla bla) Python မှာဆိုရင် print (“hello world”) နဲ့တင်ပြီးတယ်.. php မှာဆို echo “hello world”; ဆိုပြီး တိုတိုလေး… java က ဘာလို့ ရှည်နေတာလဲမသိဘူး..
လူပျိုကြီး : ကြည့်ရတာ ဒီရက်ပိုင်း ဂျာဗားနဲ့များ ရန်ဖြစ်ထားသလား ဂျာဗားမကြိုက်ရင် စူပါ သို့မဟုတ် မီကို ပဲသောက်ဗျာ။
saturngod : မကောင်းတာကို မကောင်းဘူးပြောမှာပေါ့ဗျ.. ဟိဟိ… မရေးတတ်လို့ မကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်.. သင်ဘူးလို့ မကြိုက်တာ.. မသင်ဘူးရင် ကြိုက်ချင်ကြိုက်အုံးမှာ.. 😉 အခုတလော nested cafe ပဲ သောက်တာ.. nested condition တွေ အသုံးများနေလို့..
လူပျိုကြီး : သို့ပေမယ့်လည်း သူ့ကိုသုံးရင် အဆင်ပြေတဲ့ နေရာတွေကလည်း ရှိနေလေတော့ မသုံးလို့လည်း မရပြန်ဘူး။ Scriping တွေက နေရာတစ်ကာ သုံးလို့ ရတာမဟုတ်တော့ ဂျာဗားနေရာ ဂျာဗား Script သုံးသင့်တဲ့နေရာ Script ကြည့်သုံးရတာပဲ မဟုတ်လား။ ခင်ဗျားက ဂျာဗားမကြိုက်တာ ကျွန်တော်က ဘယ်ဟာမှမကြိုက်ဘူး အကုန်လုံး မတတ်သာလို့သုံးနေရတာ
saturngod : အွန်… python က script ဟုတ်လို့လားဗျ… PHP က script ဆိုတာလက်ခံတယ်.. ruby ကလည်း script မဟုတ်ဘူး.. python ကော ruby ကော java ထက်သာတယ်.. platform အားလုံးမှာလည်း run လို့ရတယ်.. မရဘူး လာမငြင်းနဲ့ java ဆို ကော်ဖီတောင်မသောက်ဘူး..
လူပျိုကြီး : အမ်.. အဲဒါတွေကို script မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတာ ဒီတစ်ခါပဲ ကြားဖူးတယ်။ http://www.softpanorama.org/Articles/a_slightly_skeptical_view_on_scripting_languages.shtml မှာတစ်ချက် ဖတ်ကြည့်ပါ။
saturngod : ဟုတ်လို့လား.. ဖတ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်.. သိပ်တော့ မကျေနပ်ဘူးဗျ.. စာပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်.. ဟုတ်မဟုတ်ကို.. ဒါနဲ့ Python isageneral-purpose high-level programming language. Python is often used asascripting language. လို့ wiki မှာပြောထားတယ်ဗျ။
လူပျိုကြီး : ခက်တော့နေပြီ အတင်းကိုပဲ Script မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြနေတော့တာပဲ။ Architecture ကိုပြင်လို့မရဘူးဗျ အခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့ Interpreted language တွေကို Script အဖြစ် အမျိုးအစား သတ်မှတ်တယ်ဗျ။ Platform ဆိုတာက ကွန်ပျူတာ တစ်ခုထဲ မဟုတ်ဘူးလေ Java သုံးတဲ့နေရာတွေက ကွန်ပျူတာမှာထက် အပြင်ဘက်မှာပိုတယ် Ubiquitous မှာတော့ Java ကိုမတိုးနိုင်ဘူး Mobile Application/Game တွေရဲ့ အများစုက Java နဲ့ရေးထားရတာ။ Scriping Languages တွေ Mobile ပေါ်မှာ သုံးလို့ရအောင် လုပ်လို့ရတယ် သို့ပေမယ့် အရင်ဟာတွေကို ယှဉ်ဖို့ဆိုတာက အဝေးကြီးမှာ ကျန်သေးတယ်ဗျ။
saturngod : အော်… အဲဒါတော့ သိဘူးဗျ… Interpreted Language ကို script အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ တကယ်မသိ… java က mobile software ရေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး အလကား ကြီးကျယ်နေတာကို ကြည့်မရတာ… တခြားပိုင်းတွေမှာ python ကို မယှဉ်နိုင်ပါဘူး..
လူပျိုကြီး : ကျုပ်လည်း ကြည့်မရပါဘူး သို့သော်လည်း မသုံးမဖြစ်နေရာတွေ ကြုံမှသုံးရတယ်။
saturngod : ဟုတ်ပါတယ်.. java ကိုတော့ mobile မှာ မဖြစ်မနေ သုံးရတယ်.. .net က windows mobile အတွက်ပဲ အဆင်ပြေတာ… နောက်ပိုင်း iphone တွေအတွက် SDK က သီးသန့်ဖြစ်လာတော့ java mobile ဘယ်လောက်ထိ ဆက်လက်တည်ရှိမလဲဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ… google android ကလည်း SDK ကထွက်မယ်ဆိုတော့ java ME က ဘယ်လောက်ထိ ဆက်လက် အောင်မြင်မလဲတော့ မသိဘူး..
လူပျိုကြီး : နောက်ပိုင်းတော့ mobile မှာ Java ရဲ့ Share တွေလျော့ဖို့ ဖြစ်လာနေပါပြီ ဒါလည်းကောင်းပါတယ် Java mobile လည်းရေးမှ မရေးတတ်ပဲကိုး ။ ပြောဖို့မေ့နေတာ ဟိုတစ်ရက်ကပဲ ဂျာဗားရဲ့ ခြေလှမ်းသစ်ကို တွေ့လိုက်သေးတယ် သူလည်း .net framework လိုပဲ jvm မှာ တစ်ခြားဟာတွေကို ပေးသုံးဖို့ ကြံစည်နေပြီ http://www.computerworld.com/s/article/9135576/Java_yields_to_other_languages_on_the_Java_Virtual_Machine ဒါကြောင့် ရှေ့ဘာဖြစ်မယ် သိပ်မှန်းမရပြန်ဘူး။
saturngod : အင်း… သူလည်း ခြေလှမ်းသစ်စသင့်နေပြီ… oracle က ဝယ်ပြီး ဘာမှ မထူးသေးဘူး… အပြောင်းအလဲ တစ်ခုလောက်တော့ လုပ်သင့်နေပြီ.. အစတုန်းကပြောတော့ java OS အထိ လုပ်မလိုလိုနဲ့ အခုတော့ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေပြန်ကော.. JUM ဆိုရင်တော့ .NET နဲ့ အပြိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်… java က mobile လောက ကို ဘယ်လောက်အထိ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာလဲ… အခုက mobile လောကမှာ touch တွေပြောင်းကုန်ပြီ…
saturngod : ကဲဗျာ… နောက်နေ့မှ ဆက်လက်ပြီး အဲဒီ အကြောင်းလေး ဆက်ဆွေးနွေးတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း စာဖတ်စရာလေးတွေ ရှိသေးလို့။
လူပျိုကြီး : လုပ်ပါလုပ်ပါ ကျွန်တော်လည်း စာဆက်ရေးဦးမယ်။
« Zawgyi Keyboard For Mac Zawgyi 2009 convertor »